Apple inotangisa yechitatu beta yeWOSOS uye tvOS | Ndinobva mac
Nezuro rakanonoka kubheta, mabheta eApple mashandiro ese kunze kwemaMacOS. Vakomana vanobva kuCupertino vakaburitsa nezuro iyo iOS, watchOS uye tvOS betas, kunyanya iyo yechitatu beta yeanotevera magadziriso ayo madhizaizi achagamuchira. Semazuva ese uye mushure mekunge WWDC yachengetwa uko Apple yakaratidza nhau dzinozosvika mune dzinotevera shanduro dzayo mashandiro, zvitsva zvinoonekwa nekusavapo kwavo, sezvo Apple yakanangana nekuvandudza mashandiro ehurongwa uye kugadzirisa madiki ese madudu anga aonekwa kusvika zvino.
Beta rechitatu rakaburitswa neApple yeApple Watch rinotiratidza iyoOSOS 3.2.3 vhezheni, iyo vhezheni inosvika mavhiki maviri mushure mekutanga kweyechipiri beta uye mwedzi mushure mekutanga kweshanduro yekupedzisira yeWOSOS 3.2.2, a vhezheni iyo zvakare yakanangisa kunatsiridza zvese kuita uye kuchengetedzeka uye kuvimbika. Kufanana nemabheja ese akaburitswa neApple eWatchOS, iyi beta inongogadzirirwa vagadziri, nekuti kusvika parizvino kana chimwe chinhu chisingashande zvakanaka, hapana nzira yekudzikisira pasi zvakananga.
Kana tikataura nezve software inofambisa iyo Apple TV, tinoona kuti Apple yaburitsawo yechitatu beta yeTVOS 10.2.2, mwedzi mushure mekuburitsa vhezheni yekupedzisira yeTVOS 10.2.1. Senge mune beta yeWOSOS, tvOS 10.2.2 haitipe chero zvitsva, sezvo Apple yadzoka kuzotarisa pakuvandudza zvese mashandiro uye kugadzikana kwayo. Kunge vhezheni yeWOSOS, tvOS mubeta inowanikwawo chete kune vanogadzira, kunyange hazvo maererano neApple yakaziviswa mune yekupedzisira kiyi, maitiro eBeta eApple TV achakurumidza kutanga kuwanikwa kune vashandisi vari chikamu chayo. chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple inotangisa yechitatu beta yeWOSOS uye tvOS
macOS Sierra 10.12.6 beta 3 yakaburitswawo
Matambudziko nekhibhodi yeako 12-inch MacBook?